YAANYO "DE BARAO": DABEECADAHA IYO SHARAXAADDA NOOCYADA KALA DUWAN MARKA KORAY GEEDO, SAWIR YAANYO - BEER CAGAARAN
Tamaandhada "De Barao": noocyo kala duwan, sharaxaad iyo astaamo, talooyin loogu talagalay geedo sii kordhaya
Bannaanka u badan, yaanyo yaryar "De Barao" ayaa loo yaqaan taniyo 90s, badankooduna waa noocyo caan ah.
Waxa uu ku guulaystay inuu iska caabbiyo cudurkiisa iyo midhaha, kaas oo soconaya xilliga beeraleyda oo idil.
Maalmahan, noocyo badan oo ka mid ah De Barao ayaa la soo saaray. Maqaalkani waxaad ka heli doontaa sharaxaad guud ee kala duwan, sifooyinka iyo astaamaha beerashada.
Sidoo kale waxay raadinaysaa isku xirka noocyada kala duwan ee noocan ah ee lagu soo bandhigay boggayaga internetka.
Yaanyo "De Barao": sharaxaadda noocyada kala duwan
Magaca dugsiga De Barao
Sharaxaad guud Baaxad-Baaskiil, kala duwan oo dheer oo leh miraha ka mid ah midabada kala duwan iyo cabbirka. Waxaa lagu taliyey in lagu koriyo. Ku xoortay geedihii yaryar.
Midab Midabka midhihii bislaaday waa casaan, jaalle, madow.
Cunto dhexdhexaad ah 70-90 garaam
Codsiga Universal-cusub ayaa loo isticmaalay, oo dhan caanaha, daaweynta.
Noocyo dhaadheer Ilaa 40 kg halkii mitir labajibbaaran.
Noocyada sii kordhaya Foomka ku dar 1-2 cag. Wuxuu u baahan yahay garter iyo pasynkovanie.
Cadaadiska cudurada Ku adkeysanaya cudurrada badankooda Solanaceae.
Waxaa jira waxyaalo badan oo ka mid ah "Be Barao" oo kala duwan:
"De Barao" - aan caadi ahayn, warshad aan dhicin, dheer, mararka qaarkood ilaa 4 m. Waxay leedahay stem awood xoog leh, tiro badan oo caleemo cagaaran cagaaran weyn oo ah qaab dareen ah. Tirada burushyada leh qiyaastii 5-7 miraha waxay soo dhoweeyeen 10, marmarka qaarkoodna way badan yihiin. Miraha ilaa nastuleniya dhaxan.
Kala duwan Tani waa soo kabashada dambe. Iska daaweyn badanaaba cudurada, oo ay ku jiraan xanaaq goor dambe. Kala duwan waa baraf u adkaysta, beerashada lagu koriyo iyo dhulka banaanka.
Waxaan u soo qaadaynaa macluumaadkaaga faa'iido leh oo ku saabsan wax go'aamiya, kala-go'aamiye iyo noocyada kala duwan ee yaanyada.
Iyo sidoo kale kuwa kuwa sarreeya oo adkaysi u ah cudurrada badankood, ma aha mid macquul ah in gariir goor dambe.
Noocyada kala duwan ayaa waxaa nalooga soo koobay dadkayaga wakhti dheer, waxaa lagu daray diiwaanka gobolka ee Federaalka Ruushka ee noocyada beerta kaliya ee 2000. Dhalashadu waxay ahayd mid aad iyo aad u dheer, sida kor ku xusan. Laga soo bilaabo hal mitir oo laba jibbaaran oo aqalka dhirta lagu koriyo ayaa kor u qaada ilaa 40 kg. In berrin bannaan - wax yar ka yar, taas oo ku xidhan xaaladda cimilada xilliga miro.
Waxaad isbarbardhigi kartaa wax soo saarka kala duwan ee dadka kale jadwalka hoose:
De Barao ilaa 40 kg halkii mitir labajibbaaran
Sida muuqata aan muuqan 12-15 kg halkii mitir labajibbaaran
Jacaylka hore 2 kg oo baadiyaha ah
Samara ilaa 6 kg halkii mitir labajibbaaran
Mucjiso Podsinskoe 11-13 kg halkii mitir labajibbaaran
Baronka 6-8 kg oo baadiyaha ah
Mucjisyada sonkorta 2.6-2.8 kg halkii mitir labajibbaaran
Valentine 10-12 kg ka baadiyaha
uma baahna daryeel gaar ah;
sagxad u adkaysta;
qabow u adkaysta;
cudurku u adkaysta;
miraha waxaa lagu kaydiyaa waqti dheer.
Ma jiraan wax qallafsan. U dudo dhadhan dhexdhexaad ah, iyada oo aan jirin dib u eegis xamaasad leh.
Tafaasiisha Miro: Miisaanka miro-geedeedka 70-90 grams ah, waa cidhib. Midabka miro u bislaaday waxay ku xiran tahay noocyada kala duwan (casaan, casaan, jaale, madow). Waxay leeyihiin waxyaabo qalalan oo qallalan, 2 qol iyo tiro badan oo ah miraha. Si fiican u duubay cufnaanta, illaa 2 bilood. Haysashada gaadiidka fiican. Miraha cagaaran dhamaadka xilli sii kordhaya ayaa laga saari karaa, waxay si dhakhso ah u daadin doonaan meel diiran oo mugdi ah oo been ah muddo dheer.
Waxaad isbarbardhigi kartaa miisaanka miraha leh noocyo kale oo miiska saaran.:
De Barao 70-90 garaam
Dhiirigelinta Dambiga 300-450 garaam
Katya 120-130 garaam
King bell illaa 800 garaam
Crystal 30-140 garaam
Foornada cas 70-130 garaam
Waxaa loo isticmaali karaa cayriin, qaabka miro iyo qaabka fejignaanta ayaa ku habboon diyaarinta sanduuqyada caanaha ah, sidoo kale saladh cusub oo fiican. Sababtoo ah xajmigiisu yar yahay waxaa loo isticmaalaa qashin iyo saliin. Marka la ilaaliyo si fiican u hayaan qaabkooda, ha ku xoqin. Wixii casiir ah ma haboon yahay, waa mid aad u yar ee midhaha.
Hoos waxaa ku yaal sawirro noocyo kala duwan oo yaanyo ah "De Barao":
Kala duwanaanshaha "De Barao" oo ay sabab u tahay iska caabinta qabowga iyo iska-caabbinta stamina waxaa lagu kori karaa gobollo kasta oo dalka ka mid ah, labadaba dhul furan iyo aqalka dhirta lagu koriyo ama aqalka dhirta lagu koriyo.
Marka sii kordhaya ee lagu koriyo ah, xasuuso koritaanka sare ee dhirta!
Seeds, lagu qooyay xal jeermiska, waxaa lagu beeray geedo ku jira weel caam ah (mini-aqalka dhirta loo yaqaan "mini-greenhouse" ayaa la isticmaali karaa badhtamaha bisha Maarso), waxay soo qaataan soo qaadashada muuqaalka caleemaha tayo sare leh ee koobab kala duwan.
U diyaarso weelal gaar ah wuxuu hagaajiyaa nidaamka asaasiga ah ee geedo. Haddii loo baahdo, waxaad isticmaali kartaa dhiirrigeliyeyaasha kobcinta. 60-70 maalmood ka dib markii la beeri karaa lagu beeray karo lagu koriyo, wax yar ka dib - ee dhulka u furan. Sida loo diyaariyo ciidda ee aqalka dhirta lagu koriyo si loo beerto yaanyada, halkan ka akhri.
Talo soo jeedin: Ku beeray qaab adag ama qumman, 1 sq. 2 dhirta mid kasta.
Dhirta la beerto ee dhulka u furan, waxay daryeelaan hoyga haddii ay dhacdo dalagyo xoog leh. Marka ubax yaanyo ah, waxaad u baahan tahay inaad go'aansato qaabka asaasiga ah - dooran 2 caleemaha ugu xoogan, ilamaha xayawaanka ah ayaa la saaraa ka hor intaan midhaha laga helin 10 maalmood oo kasta. Fasaxyada ugu sareeya kama badna 8 boog.
Akhri wax ku saabsan noocyada yaanyada waxay u adkaystaan ​​cudurada ugu waaweyn ee habeenkii.
Iyo sidoo kale sababta oo ah yaanyada u baahan tahay boric acid.
"De Barao" waa dhir aad u sarreeya, waxay u baahan yihiin inay xirmaan si looga fogaado dillaac iyo burbur. Yaanyada noocan oo kale ah, taageero shakhsiyeed waa ka fiican - dhejis ama dhir (dhir) dhajis ah oo la xiro xididada xididada iyo garterska dheeraadka ah sida geedka.
Tamaandhada waxaa lagu waraabiyaa xididka, si weyn, biyaha waa in ay gaaraan nus nus mitir. Biyaha aan joogto ahayn looma baahna, iyo biyaha waa inaysan aheyn qabow. Si joogto ah loosening iyo mulching.
Waxaad bacrimin kartaa sida waafaqsan jadwalka caadiga ah ee microbiological. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida si habboon u bacrimiya yaanyada leh arrinta organic, sida loo isticmaalo iodine, khamiir, hydrogen peroxide iyo ammonia sida dharka sare.
Kala duwan ayaa u adkeysanaya cayayaanka iyo cudurrada, waa hababka ka hortagga jeermiska looga hortago iyadoo macnaheedu yahay in laga helo barkad kasta oo bannaanka u ah-bannaanka. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan cudurrada ugu caansan ee yaanyada lagu koriyo iyo sida looga hortago.
Sidoo kale boggayaga internetka waxaad ka heli doontaa faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan fusarium dildilaaca dhirta, verticilli iyo siyaabo aad uga ilaalisid ciqaabta goor dambe.
Wax soo saarka iyo fududaynta noocyo yaanyo ah "De Barao" waa mid aad u sareysa in beeritaanka la heli karo xitaa kuwa bilowga ah ee aan la aqoon.
Waxaan soo bandhigi karnaa macluumaadka faa'iido leh ee ku saabsan sida loo helo dalagyada ugu fiican ee yaanyada beerta furan, sida loo helo dalagyada wanaagsan ee lagu koriyo oo dhan wareega sanadka iyo wixii qarsoodi ah ee noocyo hore u koraya yaanyo jira.
Jadwalka hoose waxaad ka heli doontaa xiriiryo noocyo kale oo tamaandhir ah oo lagu soo bandhigay boggayaga internetka iyo inaynu yeelanay muddooyin Biyaha kala duwan: